Kudhinda tekinoroji inoendesa iyo inki kumusoro kwepepa, machira, mapurasitiki, dehwe, PVC, PC uye zvimwe zvinhu kuburikidza nekugadzira ndiro, inking, kumanikidza uye zvimwe zvinyorwa zvakaita senge zvinyorwa, mifananidzo, mifananidzo, uye anti-manyepo, uye wozoteedzera zvirimo mumanycr ...
Iyo yekugadzira tekinoroji yepurasitiki inochinjika yekupakata indasitiri yakave yakakura pamwe nemakore ehunyanzvi. Sezvo isu tese tichiziva, kufuridzirwa firimu ndiyo yekutanga nhanho mukugadzirwa kwepurasitiki firimu. Semunhu anoshanduka kurongedza opareta anga ari mubhizinesi kweanopfuura makore gumi, LGLPAK LTD. has s ...
Kushumira vatengi, hatisi kungotaura chete
LGLPAK LTD. yagara ichitarisa kushandira vatengi nemoyo wese sechinangwa chayo, izvo zvinongoda kwete chete sevhisi maitiro, asiwo hunhu hwakanakisa hwehunyanzvi; kana zvisina kudaro kushandira vatengi kunozoita nemaune uye kushaya simba. Mubasa rezuva nezuva, vashandi vedu vebhizinesi vanoita sei? Unyanzvi uye ...
Diki baler inotyaira budiriro mukutakura huwandu
Bhalerari inogona kuonekwa kwese kwese, chinhu chakakosha chidiki chemuchina muindasitiri yekupakata, asi mupurasitiki inochinja indasitiri yekupakata, haizi bhajawo zvaro inogona kushandiswa kune ese marudzi, zvigadzirwa, mamodheru, kupeta uye kurongedza nzira yemapurasitiki. Kutsvaga ...
Makumi Gumi Ekushingirira - Anowirirana
LGLPAK LTD. agara achitenda zvakasimba kuti chigadzirwa mhando ndiro dombo repakona rekusimudzira kwekambani. Kuona mhando yechigadzirwa, isu tinogadzira uye tinonyatso shandisa maitiro ekuongorora maitiro, proofing yekusimbisa maitiro, hombe yekuongorora maitiro, bhegi muiti ...
Sea Freight Forces Vatengi Kuwedzera; Isu Tinotora Iyo Initiative Yekuita Kuchinjisa kweVatengi
"Kubva munaChikumi 3, Maersk akakwidza online online SPOT shanduko, muripo uye mamwe ma rates nenzira yakaderera, uye mutengo wacho unofananidzwa nemadhaimani. Mari yekurasikirwa iri $ 600 / $ 1200 pa20GP / 40ft." Kubva kutanga kwechirwere, maMarket epasi rese kwese anowana ...
Ko kana ini ndoda kuwedzera ductility yemapurasitiki mabhegi? —Kuwedzera LLDPE! Iyi yepamusoro indasitiri yekugadzira firimu indasitiri ndiyo inonyanya kushanda, asi ndizvo zvakaitwa neindasitiri iyi mhinduro yakanakisa? Chekutanga pane zvese, isu tinofanirwa kuziva kuti chii chinonzi LLDPE zvinhu? Nei uchiwedzera LLDPE kune izvo zvinhu wh ...
LGLPAK LTD. inobatsira kudoka kwezuva mabhizinesi kuti awanezve hutano hutsva
Kubva makore gumi apfuura, yechinyakare-yechinyakare epurasitiki bhegi bhuku bhegi kugadzira muchina kugadzira mutsetse kwave kutariswa seyekuvira kwezuva indasitiri mumaziso evanhu vazhinji, uye yakatobviswa mune mimwe misika yakabudirira. Anenge mafekitori ese ari kuita ino indasitiri mutsara ari kutarisana neshanduko ye b ...
Zvimiro uye Zvishandiso zveKutambanudza Firimu
Pe inotambanudza firimu (inozivikanwawo seyakatambanudzwa firimu) ine yakasimba tensile simba, kubvaruka kuramba, uye yakanaka yekuzvinamatira, saka inogona kuputira chinhu chiite chizere uye kudzivirira kuti chisapararira uye kudonha panguva yekufambisa. Iyi firimu ine yakajeka yakajeka. Chinhu chakaputirwa chakanaka ...
Tambanudza Firimu Rekushandisa Fomu
1. Yakavharwa kuputira Rudzi urwu rwekutakura rwakafanana nekuderera firimu kurongedza. Iyo firimu inoputira tireyi kutenderedza tireyi, uyezve maviri anopisa anopisa anodzivirira iyo firimu kumagumo ese. Iyi ndiyo yekutanga fomu yekushandisa yekutambanudza firimu, uye mamwe mafomu ekuputira akave akavezwa ...
Kudzora kwePanyama uye Mechani Zvivakwa zveStretch Firimu
Kubuda pachena kunobatsira pakuzivisa zvinhu; kukwirira kwemarefu kwakaringana kunokodzera kutambanudza-uye kuchengetedza kushandiswa kwemidziyo; yakanaka yekurova mashandiro uye nekuyambuka misodzi yemisodzi inobvumira iyo firimu kusangana nemakona akapinza kana Iwo mupendero unoita n ...
Screen yekudhinda inoreva kushandiswa kwesilika sikirini sehwendefa replate, uye kuburikidza neiyo photosensitive ndiro inogadzira nzira, inogadzirwa kuita skrini yekudhinda ndiro ine mifananidzo uye zvinyorwa. Screen yekudhinda ine mashanu makuru zvinhu, skrini yekudhinda ndiro, squeegee, inki, printin ...